सावधान ! तपाइँको कानमा पनि रौं छन्, यस्तो खतरा | KTM Khabar
सावधान ! तपाइँको कानमा पनि रौं छन्, यस्तो खतरा
२०७४ जेष्ठ ५ गते १५:२५ मा प्रकाशित
५ जेठ । गाउँ घरमा जसको कानमा रौं हुन्छ उनीहरुलाई कन्जुस हुने मानिन्छ । कतिपयले कानमा रौं हुनेहरु अत्याधिक बाठो हुने ठान्छन् । अझै कतिपय समुदायमा कानमा रौं भएमा आयु लामो हुने विश्वास पनि गरिन्छ । तर बैज्ञानिकहरुको शोधले भने अर्कै कुराको संकेत गरेको छ । यदि तपाइँको कानमा लामो लामो रौं छन् भने होस् गर्नुस् तपाइँ गम्भिर रोगको शिकार हुने खतरा हुन सक्छ ।
हालै गरिएको एक शोधमा कानमा लामो लामो रौं हुनेहरुलाई हृदय रोगको खतरा बढी हुन्छ । खासगरी सामान्य भन्दा लामो आकारको रौं कानमा बाक्लो छ भने त्यस्ता ब्यक्तिलाई हृदयघातको खतरा समेत उच्च हुने अध्यनको निष्कर्ष छ ।
कानमा रौं हुने समस्या बंशाणुगत भन्दा बढी अहिलेको जीवन शैली र आहार विहारका कारण हुने बैज्ञानिकहरुको बुझाइ छ । सिगरेट पिउनेहरुमा यो समस्या उच्च देखिएको समेत उनीहरुले बताएका छन् । शोधका अनुसार तपाइँको कान र हृदयघातको गहिरो सम्बन्ध छ । सन् १९७३ मा डाक्टर सान्डर्स टी फ्रान्क र उनको टिमले अधिकाँश हृदयघातको समस्या हुनेहरुको कानमा लामो रौं हुने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएका थिए । यदी तपाइँको कानमा पनि लामो रौं छ वा रौं लामो हुँदै गएको अनुभव गर्नु भएको छ भने सावधान हुनुस् ।एजेन्सीको सहयोगमा